October 4, 2021 N88LeaveaComment on यस्ताे रहेछ बुद्ध एयरकाे विमानकाे पाङ्ग्रा नखुल्नुकाे कारण, भयाे खुलासा
काठमाडौं । ल्याण्डिङ गियरमा समस्या आएको भन्दै विराटनगरमा पुगेर पनि पुनः काठमाडौंमै जहाज फर्काएको सम्बन्धमा बुद्ध एयरले आन्तरिक रुपमा गरेको जाँचबुझ रिर्पोट सोमबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा बुझाएको छ । कम्पनीका अनुसार जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएको छैन । जहाजमा ल्याण्डिङ गियर खुलेको देखाउने सेकेन्डरी इण्डिकेटरले स्पष्ट रुपमा काम गरेको र प्राइमरी इण्डिकेटर मधुरो बलेको अवस्थामा […]
‘कुख्यात अपराधी’ चार्ल्स शोभराजको कैद छुटको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने सर्वोच्चको आदेश
October 4, 2021 N88LeaveaComment on ‘कुख्यात अपराधी’ चार्ल्स शोभराजको कैद छुटको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराजको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। शोभराजले ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने ७५ प्रतिशत कैद छुटको सुविधा पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेका थिए। यसअघि गत बर्षको चैत २० गते केन्द्रीय कारागार […]
October 4, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईवि’रुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाउने मिति ताेक्याे
काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आगामी कात्तिक १५ मा फैसला सुनाउने भएको छ । सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सोमबार बहस सुनेपछि सो विवादमा कात्तिक १५ गते फैसला सुनाउने मिति तय गरेको हो । सर्वोच्चले कात्तिक १० […]
उपराष्ट्रपतिका पुत्र दिपेश पुनले पाए यति ठूलो जिम्मेवारी
October 4, 2021 N88LeaveaComment on उपराष्ट्रपतिका पुत्र दिपेश पुनले पाए यति ठूलो जिम्मेवारी
काठमाडौं । अखिल क्रान्तिकारीको महासचिवमा उपाध्यक्ष दिपेश पुन चयन भएका छन् । अखिल क्रान्तिकारीको काठमाडौंमा सम्पन्न २२औं सम्मेलनबाट पुन महासचिवमा चयन भएका हुन् । उनी यसअघि उपाध्यक्ष थिए । पुन २०४५ वैशाख १० गते रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका २ राङ्सीमा जन्मिएका हुन । उनी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङका पुत्र हुन् । संगठन, व्यवस्थापन र राजनीतिक वैचारिक […]
श्रीमती वा प्रेमी/प्रेमिकासँग घुम्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन बिदा, खर्च पनि सरकारले नै दिने !
October 4, 2021 October 4, 2021 N88LeaveaComment on श्रीमती वा प्रेमी/प्रेमिकासँग घुम्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन बिदा, खर्च पनि सरकारले नै दिने !
काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट थलिएको पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि ल्याएको १० दिने काज बिदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एकजना गैरकर्मचारी अर्थात् कर्मचारीको पारिवारिक सदस्यलाई पनि खर्च उपलब्ध गराउने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एक जनालाई पनि सोही कर्मचारीले […]
देउवा सरकारसँग रिसायो विप्लव नेकपा, दियो यस्तो कडा चेतावनी !
October 4, 2021 N88LeaveaComment on देउवा सरकारसँग रिसायो विप्लव नेकपा, दियो यस्तो कडा चेतावनी !
काठमाडाैं । तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण भएपनि नतिजा नआएपछि विप्लवले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग गत फागुन २१ गते ३ बुँदे सहमति गरेर विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा […]
October 4, 2021 N88LeaveaComment on ठमेलको ‘एलओडी’ क्लवका मालिक गोरखा कांग्रेसबाट निर्वाचित
गोरखा । नेपाली कांग्रेस गोरखाको क्षेत्रीय अधिवेशनबाट युवा व्यवसायी प्रेमकुमार खत्री महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । काठमाडौंको ठमेलमा रहेको सबैभन्दा ठूलो र आकर्षक क्लव ‘एलओडी’ (लर्ड अफ द ड्रिङस्)का मालिक (पार्टनर) समेत रहेका खत्री गोरखाको क्षेत्र नं. १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका हुन् । खत्रीले खुलातर्फबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । खत्रीले ५८५ मत […]
October 4, 2021 October 4, 2021 N88LeaveaComment on आज नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अन्तिम तयारी, १८ मन्त्रीमा को–को ?
काठमाडाैं । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका चार दलले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लागि अन्तिम तयारी गरेका छन् । गठबन्धनमा पाँच दल रहेको भएता पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि चार दलले सरकारमा सहभागी हुने अब बाँकी १८ जना मन्त्रीको नाम तय गर्ने अन्तिम तयारी गरेका हुन् । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले यसअघि प्रधानमन्त्री सहित गृह, […]
सूर्य थापाले भेटे संसद भवन अगाडिको सडक मै रामधुलाई !
October 4, 2021 N88LeaveaComment on सूर्य थापाले भेटे संसद भवन अगाडिको सडक मै रामधुलाई !
काठमाडौं । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा झण्डै कुटिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको दिनदहाडै सातो टिपिएको हो । असोज दोस्रो साता नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (पानीट्यांकी) को पारिपट्टी, मन्दिरसँगै पिपलबोटछेउको चियापसलमा एमालेसम्बद्ध केही पत्रकार चिया पिइरहेका थिए । त्यहाँ ‘तामाकोशी सन्देश’ पत्रिका निकाल्ने रामचन्द्र बस्नेतसहितका […]
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नयाँ पात्र !
October 4, 2021 N88LeaveaComment on बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नयाँ पात्र !
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साढे दुई महिनाका लागि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले यस्तो प्रस्ताव गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्रै लफडा भएको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले बागमती प्रदेश सरकारबारे काँग्रेसको प्रस्ताव आपत्तिजनक भएको बताए । महाधिवेशनलाई लक्षित गरी अढाई महिना आफ्नो नेतृत्वमा सरकार […]